Cillad gashay habka mushahar-bixinta oo dad badan saameysey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cillad gashay habka mushahar-bixinta oo dad badan saameysey
La daabacay onsdag 2 oktober 2013 kl 10.30
Boqolaal qof oo waqti dheer jirro ku qornaa ayaan helin lacagtii ay xaqa u lahaayeen. Taasina waxay ku timid qalad galay habka ay laamaha dowladdu u bixinaayeen 13kii sano ee ugu dambeeyey. Haddana waxaa la ogaaday in dhibaatadaasi saameysey 600 oo qof oo ka tirsan ciidamada boliiska. Laakiin waxay dhibaatadaasi saameyn ku yeelan kumanaan qof oo waqti dheer jirro ku soo qornaa.
Habka mushahar-bixinta oo uu boliisku dhowaan ka helay qaladka waxaa isticmaala ilaa 150 hay’adood oo dowli ah. Waxay ahayd intii u dhexeysey sannadihii 1997 iyo 2010 markii uu habkaani keenay in dad bukaan dheer ku qornaa ay helaan lacag aad uga yar tii xaqa u lahaayeen.
Sannadkii 2005 ayaa cillad laga helay habka mushahar-bixinta, laakiin waa la iska indha-tiray in la ogaado wixii sababay. Taasina waxay sababtay in dadka waqtiga dheer jirrada ku qoran aysan helin gunnada dheeraadka ee mushaharka la socota oo ay xaq u lahaayeen sidii lagu heshiiyey.
Hadda 600 oo boliiska ka tirsan oo ay dhibaatadani saameysey waxay heleen magdhaw. Hay’adda boliiska qaranka ayaa gu’gii la soo dhaafay bixisay siddeed milyan oo karoon. Balse waxaa jiri kara kumanaan qof oo dowladda u shaqeeya oo ay dhibaatadaani saameysey.